ဒင်္ဂါးပြားသည် Lollipop အရောင်းဂိမ်းစက် candy machine ဖြစ်သည်
ဒီစက်၏အသွင်အပြင်ကိုသကြားလုံးအဖြစ်အဓိကထားသည်။ လှပသောမီးများ၊ ချစ်စရာကာတွန်းပုံစံ၊ တောက်ပသောအရောင်များ။ ကလေးများသည်အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသေးစား၊ အမြန်ပြန်လာခြင်း၊ အန္တရာယ်မရှိ၊
၁။ ကလေးများသည်မိဘများနှင့်ကစားသည်၊ သူငယ်ချင်းအချို့သည်အတူတူကစားကြသည်၊ ပို၍ ပျော်စရာရှိသည်
၅။ Mainboard ပုံမှန်လည်ပတ်သည်
ဒင်္ဂါးသည် Arcade Music Dancing Game Machine ဖြင့်လည်ပတ်သည်
၂၇ ၄၇ ဒီဂရီမြင့်မားသော definition monitor သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Visual Experience ကိုပေးသည်
4. ဖက်ရှင် design.colorful အလင်းရောင်
အပန်းဖြေ Euqipment ဒင်္ဂါးမှဂီတကခုန်ဂိမ်းစက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
၂. ၅၅ လက်မ HD LCD display သည်သင့်အားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်
၃။ ဖက်ရှင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း၊ ရောင်စုံ LED၊ လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
၄။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတေးသီချင်းများ၊ အေးမြသောပေါ့ပ်ဂီတ၊ ဖက်ရှင်အသံညွန်ပြမှုများသည်အလွန်လွယ်ကူသောအကသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးရွေးချယ်ထားသောသီချင်းများစွာရှိသည်။
4. Stereo အသံစနစ်သည်သင့်အားပိုမိုမှန်ကန်သောခံစားမှုကိုဖြစ်စေသည်။
၆။ နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပရိုဂရမ်နှင့်တေးဂီတအသစ်များကိုထောက်ပံ့ပါ။
၇။ အပန်းဖြေစခန်း၊ ဂိမ်းစင်တာ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ပန်းခြံ၊
၁. ၅၅ လက်မ HD LCD display သည်သင့်အားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်
၂။ ဖက်ရှင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း၊ ရောင်စုံ LED၊ လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
၃။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတေးသီချင်းများ၊ အေးမြသောပေါ့ပ်ဂီတ၊ ဖက်ရှင်အသံညွန်ပြချက်များသည်အလွန်လွယ်ကူသောအကသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးရွေးချယ်ထားသောသီချင်းများစွာရှိသည်။
၅။ နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဂရမ်နှင့်တေးဂီတအသစ်များကိုထောက်ပံ့ပါ။
၆။ အပန်းဖြေစင်တာ၊ ဂိမ်းစင်တာ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ပန်းခြံ၊
ဒင်္ဂါးသည်ကစားသမား ၂ ယောက်အတွက် ၃၂ ​​လက်မ Pandora Arcade ဂိမ်းစက်ကိုအသုံးပြုသည်
၁။ ဂန္ထ ၀ င်ဂိမ်း ၃၀၀၀ ကျော်၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောတိုက်ပွဲ
၂ ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားပါ၊ ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။
စက်၏ 4. အရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများ။
၅.၂ လက်မ HD LCD မျက်နှာပြင်မြင့်မားသော။
7. ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာ။ တန်ဖိုးနည်း, ဝင်ငွေမြင့်မားသော!